Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 2
Misy mpahay teolojia mino ny finoanoam-poana ve? dia nanontaniana iray amin'ny antoko iray namana tsy ela.
Ny Theosophist dia manaiky ny zava-misy rehetra, ary tsy mamoy ny anton'izany mihitsy. Saingy ny Theosophist dia tsy mitsahatra ary miala amin'ny votoatiny; Miezaka mamantatra izany amin'ny fiaviany izy ary mahita ny vokany. Ny finoanoam-poana dia ny finoana na ny fampiharana zavatra iray nefa tsy fantany akory ny antony. Amin'ny fahazavana lehibe kokoa, ny finoanoam-poana dia fanekena ny saina amin'ny teti-dratsy na ny fironana momba ny fanao sasany tsy misy antony hafa amin'ny finoana. Ny finoanoam-poana amin'ny vahoaka dia ny fisaintsainana ny fahalalahana hadiniana. Ny fahalalàhana, sy ireo izay manana fahalalana, ny vahoaka dia manohy ny fampiharana ireo endrika; ary noho izany ny endriky ny finoana sy ny finoana dia natolotry ny lovam-panahy avy amin'ny taranaka nifandimby. Rehefa lasa lavitra kokoa amin'ny fahalalana izy ireo dia mifikitra amin'ny finoanoam-poana azy ireo ary mety ho lasa fanesoana. Ny fampiharana tsy fahalalana no finoanoam-poana. Tsidiho ireo fiangonana ao amin'ny tanàna lehibe amin'ny alahady maraina. Jereo ny fombafomba fiderana; jereo ny filaharan'ny choristers; jereo ny tsanganasan'ny biraon'ireo izay manao ny asa fanompoana; jereo ireo sarivongana, firavaka masina, fitaovana ary marika; Henoy ny famerenana sy ny fombafomba fanompoam-pivavahana ho-inona? Azontsika atao ve ny manome tsiny ny iray amin'izato noho ny fiantsoana azy io ho finoanoam-poana, ary milaza fa vahoaka ninonino isika? Manintona antsika hijery ny finoan'ny hafa izay tsy dia mahagaga loatra noho ny olom-pantatsika. Ny finoanoam-poanan'ireo izay antsointsika hoe "tsy mahalala" sy "tsy mino", dia tsy maintsy ho nisy fiaviana. Ireo izay mahalala fa tsy maintsy mandinika ny fomban-drazana na ny finoanoam-poana. Raha manao izany izy ireo dia hahazo fahalalana, izay mifanohitra amin'ny fisainany tsy manam-pahaizana-finoanoam-poana. Ny fianarana tsy miangatra manoloana ny finoanoam-poana iray dia hanambara ny tsy fahaizana mamantatra ny maha-izy azy. Tohizo ny fianarana ary hitarika ho amin'ny fahalalana ny tena.
Inona no fototr'izany ho an'ny finoanoam-poana fa ny iray teraka miaraka amin'ny "caul" dia mety manana manam-pahaizana ara-tsaina na hery avy amin'ny hery asan'ny maizina?
Izany finoana izany dia midina avy amin'ny taonan'ny fahagola, raha ny olombelona no nanao firaisana amin'ny zavaboary ao an-tany sy manerana ny tany. Ny fahitan'ny olona, ​​ny sofina ary ny fahatsiarovan-tena hafa, dia nihanihena sy nihalalina kokoa. Tsy misy ampahany amin'ny vatan'ny olombelona izay tsy mifandray amin'ny herin'ny hery sy ny hery amin'ny iray na maromaro amin'ireo tontolo tsy hita maso. Ny antsoina hoe "caul" dia mifandray amin'ny tontolo astral. Raha, raha vao teraka amin'ity tontolo ity ny olona, ​​dia mitoetra ao aminy ny kiboribary na manintona ny vatan'ny astra amin'ny fironana sasany ary manintona azy any amin'ny tontolo astral. Amin'ny fiainana aorian'io dia mety handresy ireo fironana ireo, saingy tsy hofoanana velively tanteraka, satria ny linga sharira, ny vatan'ny astral dia mamaritra ny fahatsapana avy amin'ny hazavana astral. Ny finoanoam-poanan'ireo mpitaingin-tsoavaly dia miantehitra amin'ireto relic ireto, noho ny maha-sorena ny "vintana vintana" na ny fikojakojana ny fandaniana azy, dia mifototra amin'ny hoe ny fiarovana ny embryon amin'ny singa mifanohitra amin'ny laharam-pahamehana izao tontolo izao, mba hahafahany miaro ny loza amin'ny rano izay mifanaraka amin'ny hazavana astral ary ireo singa izay, na dia antsoina hoe ara-batana aza izy ireo, dia tsy avy amin'ny asan'ny maizina ary avy amin'ny tontolo astral.
Raha misy hevitra iray azo ampitaina ao an-tsain'ny hafa, nahoana no tsy natao araka ny tokony ho izy sy amin'ny fahaizana amam-pahalalana toy ny fitondràna tsotra?
Tsy vita izany satria tsy "miresaka" ao an-tsaina; Tsy mbola nianatra ny fitenin'ny hevitra ihany koa izahay. Saingy, ny hevitsika dia miverimberina ao an-tsain'ny hafa matetika kokoa noho ny fiheverantsika azy, na dia tsy natao ho toy ny mahazatra aza izany rehefa miresaka isika satria tsy voatery hifanerasera amin'ny alalan'ny heviny fotsiny isika, ary noho isika dia tsy handray ny olana hanabe ny saina sy ny saina mba hanao izany. Ny teraka eo anivon'ny kolontsaina dia mikarakara, manofana, manaparitaka ary manabe ny lalan'ny ray aman-dreny na ny faritany izay nahaterahany. Mijanòna fa mieritreritra, ary ho hita avy hatrany fa ilaina ny faharetan'ny mpampianatra sy ny ezaka maharitra ataon'ny mpianatra mba hahafantarana ny fahaiza-miteny sy ny famakiana ary ny fanoratana ny fiteny iray, ary mba hianarana ny fahazarana, ny fomba amam-panao ary ny fomba fisainana amin'ny fiteny. Raha mitaky ezaka sy fampiofanana izany eto amin'ity tontolo ara-batana ity mba hianatra fiteny iray, dia tsy mahagaga fa vitsy ny olona afaka mamindra ny eritreritra marina raha tsy mampiasa teny. Tsy asan'ny maizina intsony ny handefasana hevitra tsy misy teny toy ny hoe handefasana hevitra amin'ny fampiasana teny. Ny fahasamihafana dia hoe efa nianatra ny fomba hanaovana izany eo amin'ny tontolon'ny resaka, nefa mbola mitoetra ho tsy mahalala toy ny ankizy tsy manan-danja eo amin'ny tontolon'ny eritreritra. Ny famindrana ny eritreritra amin'ny teny dia mitaky antony roa: ilay miteny, ary izay mihaino; Ny vokatra dia ny valiny. Izany no ahafantarantsika ny fomba hatao, fa ny fomba tena ilaintsika sy takatsika dia toy ny asantsika ho toy ny famindrana hevitra tsy misy teny. Tsy fantatsika hoe ahoana sy amin'ny fomba ahoana no iasan'ny taova isan-karazany ao amin'ny vatana mba hamoahana ny feo; Tsy fantatsika ny fizotran'ny feo nambara tamin'ny alalan'ny habaka; Tsy fantatsika hoe ahoana ny feon'ilay tympanum sy ny harefo; Na amin'ny dingana toy inona aza no dinihina amin'ny faharanitan-tsaina izay mahatakatra ny eritreritra ampitaina amin'ny feo. Saingy fantatsika fa vita izany rehetra izany, ary mifankahazo isika amin'ny fomba toy izany.
Moa ve isika rehetra izay mifanandrify amin'ny dingan'ny fandinihana hevitra?
Eny. Ny fizotry ny telegrafika sy ny sary dia mitovy amin'ny fandikana hevitra. Tsy maintsy misy ny mpandraharaha izay mandefa ny hafany, tokony ho ilay mpandray izay mahafantatra izany. Noho izany dia tsy maintsy misy olona roa izay nohamarinina, nampiofanina na nampianarina hampita ny hevitry ny tsirairay ary hifanaraka ny hevitry ny tsirairay raha toa ka manao izany amim-pahamalinana sy araka ny tokony ho izy izy ireo amin'ny fomba amam-panao mahazatra ny resadresaka tsotra, toy ny olona roa tsy maintsy miteny Io fiteny io ihany no resahana. Voalaza fa maro ny olona afaka manao izany, saingy manao izany amin'ny fomba tsy manam-pahaizana fotsiny izy ireo, satria tsy vonona ny hanolotra ny saina amin'ny fampiofanana henjana. Izany fampiofanana ny saina izany dia tokony ho toy ny filaminana, ary mitantana amim-pitandremana, toy ny fiainan'ny manam-pahaizana ao amin'ny sekoly fanabeazana tsara.
Ahoana no ahafahantsika miresaka amin-kafanam-po?
Raha mitandrina tsara ny sainy sy ny sainy ny olona iray, dia ho takany fa ny fomba fisainany dia ampitaina amin'ny hafa ny eritreriny. Ilay izay te hiresaka amin'ny eritreritra tsy mampiasa ny teny dia tsy maintsy mianatra mifehy ny asa ao an-tsainy. Satria ny rafitra ao an-tsainao dia voafehy, ary ny iray dia afaka mitazona ny saina tsy tapaka amin'ny lohahevitra rehetra, dia ho hita fa ny saina dia mamoaka ny endrika, mametraka ny endrika sy ny toetran'ilay foto-kevitra izay heverina, ary amin'ny Indraindray dia mampita ity lohahevitra ity na mieritreritra ny zavatra izay tondroiny, amin'ny fanolorana izany any. Raha vita tsara izany, dia azo antoka fa handray an'io ilay olona itodihan'ilay hevitra. Raha tsy vita tsara izany dia hisy ny eritreritr'izy ireo tsy hay lazaina momba ny zavatra tadiavina. Raha ny famakiana na ny fahalalana ny eritreritra, ny asan'ny saina dia tsy maintsy fehezina ihany koa raha toa ka raisina sy takatra ny eritreritra hafa. Izany dia atao amin'ny fomba mitovy amin'ny hoe mihaino ny teny hafa ny olona mahira-tsaina. Mba hahatakarana tsara dia tsy maintsy mihaino tsara ireo teny lazaina. Ny mihaino amim-pitandremana dia tokony hajaina araka izay azo atao ny saina. Raha toa ka miditra ao an-tsain'ny mpihaino ny hevitra misongadina dia tsy omena ny fiheverana ilaina, ary ny teny, na dia tsy henony aza, dia tsy takatra. Raha mamaky ny eritreritry ny hafa ny sainy dia tsy maintsy atao ao anaty tsi-fahampiana tena izy ka mety ho voatahiry mazava sy mazava tsara ny fiheveran'ny hevitra navoaka. Raha toa ka mazava sy miavaka io hevitra io dia tsy hisy fahasarotana na inona na inona amin'ny fahatakarana azy io. Araka izany dia hitantsika fa ny sainan'ny fampitaovana ny eritreritra sy ny sainin'ny mpandray ilay hevitra dia samy tokony hampiofanana amin'ny fampiharana, raha toa ka ny fandinihana ny hevitra dia tokony atao amim-pahamalinana sy amim-pahamendrehana.
Mety ve ny mamaky ny eritreritry ny hafa raha tiantsika izy ireo sa tsia?
Mazava ho azy fa tsy. Ny fanaovana izany dia tsy azo ekena sy tsy ara-dalàna raha ny fandalinana ny fandalinan'ny hafa ary ny famerenana ny bokiny manokana. Isaky ny mandefa hevitra ny olona iray dia voafintina amin'ny maha-izy azy ny mpandefa ary mitondra fanamafisana na sonia. Raha toa ny hevitra dia natiora izay tsy tian'ny mpandefa azy ho fantatra, ny marika na sonia amin'ny mpandefa dia manamarika azy io toy ny fananganana valopy "manokana" na "manokana". Izany dia mahatonga azy tsy hita maso Ho an'ny mpangalatra tsy mendrika, raha tsy misy ny fisainana amin'ny famolavolana azy ary mifandray amin'ny mpitsabo. Amin'ny tena mpandala ny tena, dia tsy hovakina na tsy ho voahelingelina ny eritreritra toy izany. Raha tsy ho an'ity sakana ity avokoa ireo mpampiasa ny herin'ny maingoka dia ho afaka ho lasa mpangalatra amin'ny alina, ary, angamba, dia handao ny ilàna ny hahazoana vola amin'ny antsipiriany izy ireo na hipetraka. Ho nampihorohoro ny tsenam-bola izy ireo, hametraka fitokisana amin'ny sehatr'izao tontolo izao, hifampihaona ary hifarana amin'ny fotoana toy ny an'ny "saka Kilkenny".